Nhau - Ndeipi 433Mhz RF Remote Control?
Smart izwi Remote Kudzora
Android TV BOX Remote Kudzora
Wi-Fi Remote Kudzora
Yese Remote Kudzora
AC Remote Kudzora
Chii chinonzi 433Mhz RF Remote Control?
Yakasiyana neRF2.4G, 433Mhz RF Remote Control isimba rakakwira-simba rinofambisa isina waya kure. Iyo inopfuudza daro iri kupfuura vamwe uye inogona kusvika zana metres. Auto emagetsi makiyi anoshandisawo 433 Mhz seremote control.
Iyo yekutaurirana pfungwa ye433 Mhz yakaita seiyi: chekutanga, dhata ine yakawanda macode uye yakaderera magetsi nhanho, inoiswa kune yakakwira frequency frequency uye inotumirwa kudenga. Kechipiri, iyo yakafanana frequency inogamuchira module inogona kugamuchira iyo chiratidzo. Kana gwara rekutumira masaini uye yekugashira module iine mitemo yakafanana yekodhi, mune rimwe izwi, kana iine fomati yakafanana nedhijitari yekodhi yekubvumirana, kodhi kero pamwe nekodhi yedata, kutaurirana kunowanikwa. Semuenzaniso, kana iri kure ichishandisa IC 2240/1527, saka, mutengesi akasiyana ane mitemo yakafanana yekodhi, hukama hwekutaurirana hunogona kuvakwa pakati pavo.
Nekudaro, nezve 433 Mhz yekudzivirira kure, isu tinongoda kuti vatengi vedu vape iyo voltage data yebhatani rega. Isuwo tinogona kubata iyo data nechiyero sampuro yakapihwa nevatengi vedu.
433 Mhz remote control zvinoreva kuti mafambiro ayo ekudhirowa ari padyo ne433 Mhz inova yakanaka frequency frequency. Isu 100% tinoongorora kutapurirana kwehuwandu uye simba reimwe yega kure kuona mhando yakakwana.
Wireless transceiver module, inonziwo RF433 diki module, inoshandisa radio frequency tekinoroji. Iyo inoumbwa nezvikamu zviviri. Imwe ndeimwe IC redhiyo frequency kumberi kumagumo iyo yakagadzirwa ne yakazara-dijitari tekinoroji. Imwe ndeye ATMEL AVR SCM. Iyo micro transceiver ine kugona-kwekumusoro kugona kugona. Iyo zvakare ine basa rekurongedza data, kukanganisa kuona uye kukanganisa kugadzirisa.
Izvo zvinongedzo zvinoshandiswa mu433Mhz RG iri kure ese maindasitiri akaenzana, akatsiga uye akavimbika, diki saizi uye nyore kuisirwa.
■ Wireless POS chishandiso kana PDA isina waya smart terminal zvishandiso, nezvimwe.
■ Wireless yekutarisa sisitimu kana yekuwanikidza yekudzora sisitimu yemoto kudzora, chengetedzo uye komputa kamuri.
■ Kuunganidzwa kwemashoko mukutakura, mamiriro ekunze, nharaunda.
■ Nharaunda yakanaka, chivakwa chakangwara, yekupaka manejimendi sisitimu
■ Wireless kudzora kwema smart metres uye PLC.
■ Logistic yekutevera system kana imba yekuchengetera pane-saiti kuongorora system.
■ Kuwanikwa kwedata mumunda wemafuta, gasi munda, hydrology uye yangu.
ZveTekinoroji kana mushure-kutengesa:
address:Chikamu 3798, Block 31, No.86, XiNan Rd., LvXiang Town, Jinshan District, Shanghai